यस हप्ता भरि यी राशीहरुलाई मिल्दैछ विशेष लाभ ! जान्नको लागि हेर्नुहोस साप्ताहिक राशिफल हेरेर भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ ! | Taja Khoj Khabar
Posted by Taja Khoj Khabar On July 14, 20190Comment
मेष समग्रमा साता अनुकुल देखिन्छ । तर साताको पहिलो दिन खर्चालु रहला । लगानी अनुसारको प्रतिफल मिल्ने छैन । मिथ्य कुराले सताउनेछ । आइतबार देखि समयले साथ दिनेछ । रोकिएका कार्य योजनाहरु अगाडि बढ्ने छन् । परिणाम मुखी काम हुनेछन् । जीवन साथिको महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ । सुखद दामपत्य जीवनको सुरुवात हुनसक्छ । विदेश यात्राको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । आफ्नै बहुबलबाट धेरै काम हुनछन् । घर परिवार आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ ।
बृष शनिबार आय आर्जनका दृष्टिले शुभ नै देखिन्छ । आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ । आइतबार र सोमबार अनुकुल देखिन्न । खर्च विवाद एवं आरोप प्रत्यारोपमा समय वित्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । राज्यसँग सम्बन्धित काममा झै झमेला हुनेछ । मंगलबार मध्यान्हबाट समयमा सुधार आउनेछ । उत्साहाका साथ काममा लागिनेछ । अबरुद्ध कामले गति लिनेछ । भोज भतेर उत्सवादिमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउनेछ । कार्य क्षमता बढ्नेछ । लगानीमा विचार पु¥याउनु होला ।
मिथुन शनिवार कार्य प्रगति राम्रो रहला । आइतबार र सोमबार आर्थिक दृष्टिबाट महत्व पूर्ण देखिन्छ । मंगलबार र बुधबार समयले कम साथ दिनेछ । खर्च वृद्धिले संचित धन घट्नेछ । आफन्तका कारण विवादमा परिनेछ । वोलिको अनर्थ लगानउन खोज्ने छन् । विश्वास घात हुनसक्छ । अतिथि सत्कारमा समय दिनु पर्नेछ । शेष दिन अनुकुल देखिन्छ । काम गर्ने उत्साहामा वृद्धि हुनेछ । काममा देखिएका समस्या कम भएर जानेछन् । कार्य क्षमता बढ्नेछ । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ ।
कर्कट विहिबार मध्यान्ह सम्म समय अनुकुल रहेकोछ । पुराना काम फस्र्योट हुने छन् । सहज र सरल बिधिबाट अधुरा कार्य सम्पादन हुनेछन् । उद्योग,धन्दा बन्द व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ । कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन । पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ । आध्यात्मिक एवं भौतिक सुख शान्ति मिल्नेछ । आफन्त तथा साथी भाईबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । विहिबार अपरान्हबाट समय खराव हुनेछ । काम गर्दा सचेत रहनु होला । नयाँ लगानी नगर्नु होला । जोखिम पूर्ण यात्रा नगर्नु होला । मिथ्या अरोप लाग्न सक्छ ।
सिंह शनिबार खराव देखिन्छ । खानपानका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । अनावस्यक खर्च विवाद बढ्नेछ । जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला । झुट्टा कुराले सताउनेछ । विश्वास गरेकाले धोका दिन सक्छन् । आइतबार देखि समयमा विस्तारै सुधार आउनेछ । धार्मिक यात्रा हुनसक्छ । अधुरा कामले पूर्णता पाउनेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य अगाडि बढ्ने छन् । उद्योग पराक्रम बढ्नेछ । अधिकाँश आफ्ना काम आफैबाट सम्पादन हुनेछन् । साथी भाई, ईष्टमित्रको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट लगानी अनुसारको प्रतिफल मिल्नेछ ।
कन्या शनिबार केहि काम हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ । आइतबार र सोमबार खराव देखिन्छ । जोखिम मोलेर काम नगर्नु होला । मंगलबार देखि समय विस्तारै अनुकुल हुनेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ । विगतमा गर्न नसकेका अधुरा काम सम्पन्न हुनेछन् । सामाजिक काममा अभिरुची बढ्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । हिजो असहयोग गर्न सहयोग गर्न अगाडि आउने छन् । घर परिवारमा मांगलिक काम हुनेछन् । तुला मंगलबार प्रातःकाल सम्म समयले साथ दिने छ । संघर्षबाट सफलताको सिढि चढिनेछ । मुद्धा मामिलामा विजय प्राप्त होला । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । उप्रान्त विहिबार मध्यान्ह सम्म समय अनुकुल देखिन्न । काममा विभिन्न खालका समस्या आउने देखिन्छ । स्वस्थ्यमा समस्या आउनेछ । आफन्तसँगको विश्वास गुम्नेछ । संचित धनमा ह्रास आउनेछ । उप्रान्त समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । रोकिएका कामले गति लिनेछ । मानसिक तनाब घट्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् ।
बृश्चिक शनिवार अलमल बढि हुनेछ । परिणाम मुखी काम कम हुनेछन् । आइतबार र सोमबार साना साना काम सफल गर्न पनि प्रयत्न धेरै गर्नु पर्नेछ । प्रतिश्पर्धामा उत्तिर्णु पर्नेछ । मुद्धा मामिलामा जीत हुनेछ । मंगलबार देखि विहिबार अपरान्ह सम्म समय बढि अनुकुल हुनेछ । प्रयत्न गर्दा नयाँ काम हात पर्नेछ । रजोगुण बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट धेर थोर लाभ लिन सकिनेछ । वैदेशिक कार्य योजना अगाडि बढ्ने छन् । शेष सात भने प्रतिकुला भएको हुदा कुनै नयाँ काममा हात नहाल्नु होला । अहार विहारका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
साताको पूर्वाद्ध त्यति अनुकुल देखिन्न । पारिवारिक समस्यामा रुमलिनु पर्नेछ । संचित धन खर्चमा परिणत हुनेछ । काममा विभिन्न खालका समस्या आउनेछन् । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउनेछ । तनाव बढाउने खालका समाचार सुन्नु पर्नेछ । उत्तर्राद्ध भने अनुकुल रहेकोछ । संघर्षबाट टाढा नभाग्नु होला । हेलचक्र्याई गरेर काम नगर्नु होला । काममा शत्रुको बक्रदृष्टि पर्नेछ । प्रयत्न गर्दा धेरै ठाँउमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी बढ्नेछ । प्रयत्नबाट नयाँ काम हात पर्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ ।
मकर समग्रमा साता अनुकुल नै देखिन्छ । तर प्रारम्भमा पारिवारिक खर्च बढ्नेछ । विचार पु¥याउन नसके श्रमको मुल्य चुकाउनु पर्नेछ । मुद्धा मामिलाको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । लगनशिल भई कार्य गोपनियता अप्नाएर काम गर्नु होला सफल हुनुहुनेछ । प्रयत्नबाटै समस्याहरु हटेर जानेछन् । पारिवारिक सहयोगमा महत्वपूर्ण काम हुनेछन् । यात्राको योग देखिन्छ । स्वतन्त्र प्रकृतिका आयत निर्यात व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
बाह्य सहयोग कम मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । कुम्भ प्रारम्भमा कार्य लगशिलता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । प्रयत्न गर्दा केहि नयाँ काम हात लाग्न सक्छन् । परिवारबाट सहयोग मिल्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । मंगलबार विहानबाट समय त्यति अनुकुल हुने छैन । अनावस्यक विषयमा विवाद बढ्नेछ । विश्वास गरेकाले धोका दिन सक्छन् । अरुको भर विश्वासमा मात्रै काम गर्दा आफुलाई घाटा हुनेछ । हेलचक्र्याई नगरि आफै लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापारबाट उचित लाभ हुने छैन ।
मीन शनिवार सम्म समयले साथ दिनेछ । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग अल्प मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । आइतबारबाट मंगलबार विहान सम्म समय प्रतिकुल हुनेछ । आर्थिक कुराले बढि पिरोल्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । शेष समय भने अनुकुल हुदै जानेछ । इष्टमित्र साथी भाई सँग भेटघाट हुनेछ । काम प्रतिको लगाव बढ्ने देखिन्छ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । ज्ञान आदान प्रदान गर्ने अवसर मिल्नेछ । फलदायी यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
Previous: पाँचथर युवती हत्या प्रकरण: पक्राउ परेका लाओतीलाई बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश
Next: इटहरीका बासिन्दाले आँखा झिमिक्क गर्न नपाएको तीन दिन भयो
आज मिति २०७६ साल साउन ०६ गते सोमबार यी ३ राशीहरुलाई मिल्दैछ यस्तो ठुलो लाभ ! मनकामना माईको दर्शन गरी हेर्नुहोस् राशिफल !
देखने बितिकै शक्तिशालि नाग देबको दर्शन गरि कमेन्टमा “ॐ” लेख्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस !
वि.सं. २०७६ अषाढ १७ गते मंगलबार ई. स. २०१९ जुलाई ०२ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार यस्ताे छ तपाईंको भाग्य
आज वि.सं. २०७६ साउन ०४ गते, शनिबार ! यी ३ भाग्यमानी राशीहरुलाई मिल्दैछ यस्तो लाभ ! हिन्दु धर्म सबैभन्दा ठुलो मानिने नाग देवतालाई १ लाईक साथ दर्शन गरि कमेन्टमा “ॐ”लेखि हेर्नुहोस राशिफल !
बिहानीको समयमा पशुपतिनाथको दर्शन गरि हेर्नुहोस आज मिति २०७६ साल असार ११ गते बुधबारको राशिफल !